globalpressonline » Liiska Qandaraasyada aan loo tartamin ee Xaqdarada iyo qaraabo kiilka lagu bixiyey 6-dii sanadood ee xukuumada Kulmiye hogaanka dalka hagaysay. By A/rahman fidhinle
Liiska Qandaraasyada aan loo tartamin ee Xaqdarada iyo qaraabo kiilka lagu bixiyey 6-dii sanadood ee xukuumada Kulmiye hogaanka dalka hagaysay. By A/rahman fidhinle
Oct 13, 2016 - Comments off
Xukuumada Siilaanyo intii ay hogaanka dalka haleeshay waxay isku khaladay Qaranimadii iyo Qoysnimadii waxaana meesha ka baxday cadaalad u qaybintii midhihii dawladnimo, waxaa baaba’ay xaq-dhawridii wada-lahaanshihii qaranimo, Waxaana dhinac u-ciirey oo weecsin iyo beegsin noqdey Qandaraasyadii, Hantidii guud iyo ilihii dhaqaalaha ee wadanka oo dhan. Kadib markii ay Xukuumadu Xeyndaabkii Baananka JSL ku xareeysey Xawaaladihii ilma Jini boqor si loo caseysto oo loo lunsado Lacag dakhli dawladeed ah ama lacagaha deeqaha ah ee deeq-bixiya-yaashu JSl ku deeqaan.
24- Qandaraaska Amniga (security) ee Dekeda Berbera
Waxaa mushtamaca reer Somaliland indhahooda ku daalacdeen in 30-kan qandaraas ee sare la siiyey laguna naasnuujiyey sife baalmarsan sharciga qandaraasyada ee qaranka shaqsiyaad ku xidhan ehelada xayndaabka madaxtooyada iyo shirkado sameys ah oo ay wax ku leeyihiin Wasiiradda ugu tunka weyn xukuumada. kuwaas oo hada ku gaafanoobey libqintii iyo laba liska dheeftii ay ka heleen ilihii dhaqaalaha ee wadanka .Waxaa laga dhawaajiyey in Qandaraasyadan badan ee dhinaca ka raran aan Ganacsatada iyo shacabka Somaliland marna loo soo bandhigin si loogu tar tamo sife xalaal ah ( fair competition ) laakiin lagu bixiyey sife qaraabo kiil ah oo gacan wadaag ah oo qusum iyo qoon ah
Taas oo shacabka reer Somaliland ucadaysey in aan maanta loo sineyn Yuhuuntii iyo wada lahaanshihii midhihii dawladnimo, maadaama loo badheedhay in aan cadaalad lagu qaybsan manfaca, maganta moorada iyo muquunadii uu qaranku wada lahaa. Danta guud ee JSL waxay ku jirtaa badbaado qaran iyo in Qandaraasyada qaranka lagu bixiyo sife muraayad ah oo tar tan xalaal ah oo xalibnaan iyo Xisaabtan dawladeed uu ka danbeeyo. Waxaan idiinku soo garoocayaa qormadan.. “Anigu Daaha Kama Rogin ee dadkuba wuu arkaayaa..